Ezi hlaselo kwiTatan Anime Characters ziyakhupha
Ngomzekelo Weminye YezoXhatshazo ezihlaselwa kwiTitan. Izithombe ezisuka kwi-Attack kwiTitan Iimpahla zomzimba
Kuhlala kuthethwa malunga neentlobo zezobugcisa kwi-Attack kwi-Titan. Nangona i-fluid, icocekile kwaye ichongiwe kakuhle, enye yezinto ezidume kakhulu ziyilo loyilo oluye lwaphumela ekudalweni kwezingqungquthela ezinobungqingili kunye namantombazana atshisayo abenza iinguqu zobuninzi obuguqukayo.
Ubugcisa kwi-anime bunokwenza okanye buphule uchungechunge , ngoko aluyi kubuhlungu ukudala abalinganiswa abonakalayo abulula emehlweni. Zingaba ziingcamango, kodwa oko akuvumi ukuba abalandeli bawachukumise. Nazi ezintlanu zohlaselo lwethu oluthandayo oluthile kwiibalo zeTatan. Uyavuma okanye awuvumelani?
Emva kokuhlaselwa kwamanye amanqaku ephezulu kwiTatan? Hlola oku kwaye ubanike isabelo kwi-Facebook okanye kwi-Pinterest ukubona ukuba ngabahlobo bakho bavumelana!
Uhlaselo oluPhambili olugqithisileyo kwii-Characters zeTitan
I-Top 5 yokuhlaselwa kwiindawo zokuhlala zeTitan
Ukuhlaselwa kweTest 5 ephezulu kakhulu kwiimpawu zeTatan
13 Iinkcukacha ezimnandi malunga nokuhlaselwa kweTitan
I-5 Eyona nto ihlaseleyo kwii-Character ze-Titan: i-Sasha Blouse
© Hajime Isayama, Kodansha / '' UKUKHALWA KWETITAN''Komiti yeProjekthi. Onke Amalungelo Agciniwe
Umthandi wokugqibela wokutya kunye nendawo encinci ye-kooky, uSasha Blouse (aka "I-Potato Girl") i-wacky kwaye ilungile.
Inxalenye ethandekayo yale gal ibuntu bakhe. Ungalokothi uyeke ukutshintshela iqhosha lekhefu, uphazamiseka lula. Kwaye ukulwa nokuqeqeshwa kuya kuba yinto yakhe yokusebenza ne-ninja kunye nomlingani wakhe kulwaphulo-mthetho, uConnie Springer ongomnye wabalinganiswa bethu abaphezulu be-5 kwi-Attack kwi-Titan!
U-Sasha unomdla owenzela umonakalo okwenza kube nzima ukuba ungamomotheka. Yongeza kwi-intake yayo yokutya, kwaye unomnye intombazana enolisayo kwi- Attack kwi-Titan.
I-5 Eyona nto ihlaseleyo kwizithuthi zeTatan: uMarco Bott
UMarco Bott nguMntu Omnye Umkhosi kwiTatan Character. © Hajime Isayama, Kodansha / '' UKUKHALWA KWETITAN''Komiti yeProjekthi. Onke Amalungelo Agciniwe
I-sweetest of sweet, uMarco Bott unjengebhokisi lezintsana. Ubuso bakhe obuqhekekileyo kunye neenwele ezahlula kumnika intshwankwenkwenkwenkwenkwenkqo ebonakalisa ukungabi namacala.
Nangona ekhangeleka umntu omelele kakhulu ukuba alwe, unamandla ngaphezu kwejoni kwaye wabelwa ukuba alele iqela lakhe kwelinye lekhefu lokuqala. Kungakhathaliseki ukuba yimfazwe eqhubekayo kunye neTitans, akaze alahlekelwe yintliziyo yakhe kwaye uyabanyamekela abo bajikelezile.
Kungakhathaliseki ukuba uMarco wenza ntoni ngokunyaniseka kuye, kwaye kungekhona nje ngokuba unomothekayo onokuyenza intliziyo ibe yintliziyo. Ubukeka bakhe obuhle kunye nethemba lenza ukuba ube ngumntu oyinyaniso entliziyweni ngentlobo yesisa esiyithandayo ukubukela kwi-Attack kwi-anime ye-Titan.
I-5 Eyona ntlonelo enkulu kwiTatan Characters: Mikasa Ackerman
UMikasa Ackerman nguLowo weSizwe esihlaseleyo kwizithuthi zeTitan. © Hajime Isayama, Kodansha / '' UKUKHALWA KWETITAN''Komiti yeProjekthi. Onke Amalungelo Agciniwe
Izinwele ezimnyama ezimnyama zikaMicasa zibeka ubuso bakhe, zibonisa iipumlo zakhe ezincinci kunye nemilomo eluhlaza. Ukwahluka kwesikhumba sakhe esiluhlaza kumnika umbonakalo weengelosi owenza ukuba akhangele kumangalisa. Inxalenye ebaluleke kakhulu yile ntombazana encinci ayikho ibukeka bayo. UMikasa unako ukusika inyama yeTitan kwi-blink yeliso, echaza ngalo "njengokhethekileyo." (Ufanele umthande umfazi owaziyo ukuhlangabezana naye kwimfazwe).
Olu dibiswano lwabeshushu kunye nezobuchule alumenze nje olunye lwe-Attack ekhangayo kwiibalo zeTatan kodwa enye yeyona nto ibhetele!
I-5 Eyona nto ihlaseleyo kwii-Characters ze-Titan: UJean Kirstein
UJean Kirstein unguMoya ophezulu. © Hajime Isayama, Kodansha / '' UKUKHALWA KWETITAN''Komiti yeProjekthi. Onke Amalungelo Agciniwe
Ngokuqhelekileyo yaqaphela phakathi kokuhlaselwa kwezilwanyana zeTitan ngenxa yobunzima bakhe obude (ukufumana isiteketiso esingaqhelekanga sokuthi "ubuso bamahashe"), kubonakala ngathi uJean Kirstein ubonakala ebonakalayo.
Izinwele zakhe ezinombala obomvu kunye namacala atyebileyo kumnika into ephawulekayo, engakhankanyi ubuso bakhe obukhulu obungayifihla into awayevakalelwa ngayo. Ivakalisa isimo sakhe sengqondo, kuba ngokuqinisekileyo akayilanga ilwimi.
Ngokuqinisekileyo, uneentsilelo zakhe, kodwa kuninzi ukuthanda ngoYean kwi-anime yeTatan yokuhlaselwa . Yiba ngumlomo wakhe-wonke ubuso obuso okanye ubuso obusweni, unento ethile ekhethekileyo.
Uhlaselo oluphezulu kakhulu lwe-5 kwi-Titan Abalingiswa: uKrista Lenz
UKrista Lenz Ubheka Okulungileyo Kwi-Post-Apocalypse. © Hajime Isayama, Kodansha / '' UKUKHALWA KWETITAN''Komiti yeProjekthi. Onke Amalungelo Agciniwe
UKrista Lenz ubuhle bendabuko, kunye nomntu omncinci kunye nonwele obude obude obukhanya njengelanga. Eyaziwa ngobubele bakhe, izinga likaKrista lovelwano ngenye intlonelo yabalinganiswa beTitan kuye kwamenza waba mbulelo kumajoni amaninzi.
Xa iqela elincinane lisuka kwiRegout Regiment liye lithengiswa ngexesha lomsebenzi, igibela ngehashe ezintathu njengesiqhwala kwizambatho ezikhanyayo, nje kuphela. Isimo sibukeka njengento ethile evela kwimifanekiso yeGrike yamandulo; Akumangalisi ukuba kutheni uhlala ebizwa ngokuba ngumthikazikazi.
Yonke into malunga neKrista iyingcamango, ukusuka kwindlela ekhangayo ngayo ukunyaniseka kwakhe.
AbaPhizi abaPhambili abaPhambili kwi-Baseball History